4 Na. 2-Handle Bathroom Faucet
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Chrome athlọ ịsa ahụ foset With Drain Assembly
gosiri 4.74 nke 5 dabeere na 23 ahịa Fim
Na-eweta ụdị, arụmọrụ na ego, nnweta wowowfaucet bụ ntinye kachasị mma maka ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Oke kachasi elu nke 1.2 g kwa sekọnd ga - enyere aka ichekwa mmiri. Igwe eji akwa valvụpu seramiiki na-enye ndụ nke arụ ọrụ na-enweghị mmiri, yana ọnụego ọla jikọtara na-eme ka Mbido ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla. Nhọrọ dị mma maka ụlọ mposi kwa ụbọchị
Ntụziaka nwụnye 2321400C
4 inch Centre Bath Foset 2321400C Elu: 7.5 ″; Spout Elu: 4.4 ″; Oghere Oghere: 25 - 38 mm1 - 1.5 ″
Uclọ ịsa ahụ Chrome, ihe ịchọ mma, okirikiri chrome, ihu dị ka enyo, zuru oke maka ịchọ mma ụlọ ime ụlọ nke oge a, ụlọ mgbazinye, ụlọ, ụlọ, ụlọ ịsa ahụ, iji azụmahịa, ebe a na-eme njem
Ugboro abuo eji aka abuo: Ogwe aka abuo, odi nma iji dozie otutu na olu, Arc spout di elu nye gi zuru oke n'okpuru spout
Ogo dị elu: NSF seramiiki diski na-ahụ maka enweghị mmiri mgbapụta, ihe na-adịgide adịgide (SS201, na zinc metal), ABS aerator na-enye mmiri dị nro na nwayọ nwayọ.
SKU: 2321400C Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: igbapu nzuko, chrom chinechara, ntụpọ guzogide
Nnukwu imewe, ịchapu na ọdịdị nke oge a. Nnukwu ịrị elu nke pọmpụ ahụ na-eme ka ebe mkpofu nke ụlọ na-asa aka gị ma ọ bụ n'isi.
Dị nnọọ ka ya bụrụ na ha mere a kichin imi foset na otu imewe.
Akwa ọkpọkọ na ọnụahịa. Mfe iji wụnye.
zuru oke maka ime ụlọ ịwụ ahụ m. Ọ dịghị ihe ọzọ leakLooks kpochapụwo. Na-arụ ọrụ dị ukwuu ma gbanye mmiri dị mfe ma dịkwa mma.
Nnọọ afọ ojuju na price, àgwà na ịke, ya mere wee plumbing ụdị na uwe aka, m ga-enweta onye ọzọ maka ụlọ ịsa ahụ m ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nwụọ.
Ya mere mara mma, anyị nwere nsogbu na ịwụnye drain ahụ, mana ọrụ ndị ahịa dị ịtụnanya na ha nyeere anyị aka ozugbo!
O siri ezigbo ike ịwụnye: usoro ntụpụ-aka doro anya ma iberibe mpempe akwụkwọ niile dabara nke ọma ， dị oke mma ma dịkwa mfe iji - n'adịghị ka ọkpọkọ ochie anyị kwesịrị ịhụ n'ihi nrụnye adịghị mma na nrụrụ. Houselọ anyị zụtara nwere obere ime ụlọ ịsa ahụ dị n’ime bat mmiri ahụ; ihe ndị a anaghị ekwucha ma dabara ohere nke ọma.
Foset ya onwe ya dị ukwuu. M ga-akwado ịzụrụ ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche nke enyere dị egwu na ha anaghị agbatị ngwa ngwa ma wepụ ihe dị mfe.
M *** n2020-05-10
Anyị na-achọ ọdịdị nke ọdịdị a na ogo nke ewuru dị mma maka ọnụahịa ahụ, mana nsị anyị adịghị arụ ọrụ nke ọma na-eme ka ọ ghara ikwe omume imechi ya ma nwee mmiri jupụtara na mmiri.
Ọ dị oke mma. Na-ama oke. Ezigbo mkpu maka ego!
Foset dị mfe ịwụnye ma mara oke mma! Ọ bụ ezigbo ọrụ dị arọ maka ụgwọ. Ihe mgbapụta ahụ bụ ihe dị iche. Ọ dị obere, ọ kachasị plastic ma sie ike ịhazigharị. Kwesịrị ịzụta mma ka mma ma dochie nsị mmiri ahụ.
Achọrọ m ọkpọkọ maka ime ụlọ ịwụ ụmụ nwoke na nke a bụ IT !! Ọ dị ezigbo mma. Ọ swivels kwa, nke m na-amaghị. Anyị arụnyere ya mana ọ dị ka ọ dị mma!
Ntinye dị mfe ma dị ka Delta nke ọ gbanwere. Ọ na-adị ezigbo mma, ọ bụ ezie na anaghị adị mma karịa ka nickel na-ehicha
Ọ dị oke mma ma mee ka obere RV anyị gbadaa ọtụtụ ihe.
M *** r2020-07-03
A pụrụ ịdabere na ya na usoro ọgbara ọhụrụ nke ọkpọkọ mmiri a. Zuru oke dabara na ime ụlọ ịwụ ahụ ụlọ.
Anyị hụrụ ọkpọkọ ndị a n'anya
Jiri maka ime ụlọ ịsa ahụ. Ọ dị mfe ịwụnye, nwere ntuziaka doro anya. Na-ele anya na nhazi ụlọ ịsa ahụ.
Ọ dị ezigbo mma itinye ụlọ ịsa ahụ ndị nne m.
M hụrụ anya n'anya, ọ dị karịa ka ọ na-efu. Ihe ndị ahụ na-eji ire ụtọ. Mmiri gbapụta na-arụ ọrụ dị mma.
nke a bụ a mara mma foset na otito m ime ụlọ ịwụ mara mma nke ọma nke ọma e mere na ọ bụ kwesịrị ya n'ihi na price ugbu a, m zụtara nke abụọ onye obi ụtọ na ngwaahịa a
Ọbụghị naanị na nke a bụ ọmarịcha ihe eji achọ mma m nwere, di m kwuru na ọ dị mfe ịwụnye yana ụdịdị ahụ akpọsala. Onye na-ere mmiri mmiri ahụ nwere ngwaahịa maka anyị n'oge ndekọ ma na-anabata ozi ọma. Ọbụghị naanị na abụ m onye nwe ụlọ, abụkwa m Realtor. Aga m akwado ndị ahịa m na ndị ahịa ụlọ m ihe a na onye na-ere ya.
Daalụ maka nnukwu ọrụ ndị ahịa na ngwaahịa dị egwu!
Anaghị m atụ anya na ọkpọkọ mmiri ọkụ nke àgwà a maka ọnụahịa ọnụahịa a. Anụtụbeghị m nke a ika n'ihu, na bụ nnọọ mmasị na àgwà mgbe a rutere. Akụkụ ọla niile dị n’ime, dị oke oke, enweghị plastik, dị mfe ịwụnye, ọbụnadị akụkụ draịva a haziri nke ọma. Ọ bụ bọtịnụ push iji rụọ ọrụ. Akụkụ kachasị sie ike bụ iwepụ mmiri ochie. Di m abughi nwoke nwere obi uto ma o nwere nke ochie, nke ohuru na ihe obula na etinye ihe na-erughi oge. Na akụkụ kasị mma – adịghị ọzọ drippy foset !! Enweghị ike ichere ịhụ ụgwọ mmiri mmiri m na-esote!